Juarez को एकल खेलाडी खेल कल: Gunslinger: समीक्षा, जारी मिति, प्रणाली आवश्यकताहरू
सधैं सफल श्रृंखला अधिग्रहण गुणस्तर sequels। हामी यो जस्तो थियो, जसमा मा उदाहरण धेरै सम्झन सक्नुहुन्छ, दिग्गज श्रृंखला एकदम mediocre, र कहिले काँही पनि घृणित लडी पाए। एउटै कुरा Juarez को कल को एक श्रृंखला संग भयो - छ एक पहिले व्यक्ति शूटर शैली वेस्टर्न्स मा हल्ला एकदम धेरै ल्याए। पहिलो भाग यसका सबै सुविधाहरू लागि धेरै रोचक थियो - अप चरवाहे gunfights र भारतीय नियन्त्रण गर्न। यो सिर्फ अविश्वसनीय सफल भयो जो पालन-अप, को रूप मा पृष्ठभूमिमा पछि थियो। जाहिर छ, महिमा तेस्रो भाग, पहिले नै पश्चिमी आधुनिक शूटर जडान गर्न प्रयास, आधुनिक समयमा सुसज्जित जारी गरेका कारण विकासकर्ताहरूले eclipsed। यो भाग पूर्ण असफलता थियो - त्यो माटोको सबै अघिल्लो उपलब्धिहरू र परियोजना को लाभ मा trample गर्न व्यवस्थित, यो केवल केहि समझदार खेलाडीहरूलाई प्रस्ताव छैन, कान सबै आफ्नो ध्यान बुरा अघि लुकेको सतह गर्न झिकेर। सामान्य मा, यो सिर्फ एक फोहर खेल, को श्रृंखला को पनि सबैभन्दा वफादार प्रशंसक गाडे जो पछि थियो। यो व्यर्थमा, बाहिर गरिएका रूपमा। विकासकर्तालाई परित्याग र चौथो भाग, शीर्षक Juarez को कल गरे गर्नुभयो: Gunslinger, तपाईं जो र पढाइको एक समीक्षा। तर निकासी को एक बयान छैन नयाँ प्रसङ्ग पनि प्रशंसक प्रेरित - तिनीहरूले पहिले परियोजना अन्तिम भाग जस्तै विफलता हुनेछ लाग्यो थियो। खैर, तिनीहरूले गलत थिए। निस्सन्देह, नयाँ प्रसङ्ग छैन रूपमा दोस्रो रूपमा अभिनव, राम्रो र पहिलो रूपमा छ, तर अझै पनि तपाईं को Juarez खेल कल ध्यान गर्नुपर्छ: Gunslinger - एक समीक्षा तपाईं तागत र कमजोरी दुवै देखाएर यो तपाईं विश्वस्त प्रयास यसको छेउमा।
त्यसैले, तपाईं कहाँ Juarez को खेल कल सुरु गर्छन्: Gunslinger? अवलोकन ठ्याक्कै सुरुदेखि परियोजना अघिल्लो प्रसङ्ग भन्दा धेरै होनहार देखिन्छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ। विकासकर्तालाई आफ्नो गल्ती महसुस र प्रहरी sirens, पुलिस, मेक्सिकन दबाइ व्यापारीहरु र यति मा छोडेर को उन्नाइसौँ शताब्दीको वातावरण फर्के छन् भन्ने तथ्यलाई। त्यसैले फेरि Saylas Grivz नाम आफ्नो मुख्य चरित्र सैलून जान्छ जहाँ जंगली पश्चिम, आफूलाई पाउन। यो बाहिर जान्छ रूपमा, उहाँले सबै कुरा थाह छ र तुरुन्तै उसलाई एक पेय प्रदान गर्न सुरु, एक प्रसिद्ध इनाम शिकारी छ। निस्सन्देह, केवल यति, वृद्ध पटक बारेमा कथाहरू लागि विनिमय मा। यो क्षण देखि Greaves को कथा बताउने flashbacks एक सेट हुनेछ जो कहानी, सुरु हुन्छ। यो धेरै रोचक कदम हो, तर एक सानो अप पम्प्ड यो कार्यान्वयन - तपाईं यसलाई बारेमा थप भन्नेछु पछि। पाठकहरूलाई यो बारेमा सबैभन्दा उद्देश्य राय बनाउन सकून् भनेर समीक्षा परियोजना को सबै पक्षहरू कवर गर्नुपर्छ, - Gunslinger: Juarez को खेल कल को विभिन्न पक्षहरू मा अब एक नजर।
Juarez को खेल कल: Gunslinger खण्डमा प्रत्येक जो एक कहानी मुख्य पात्र द्वारा भन्नुभयो छ स्तर, एक सेट छ। स्तर वास्तवमा धेरै हो, त्यसैले हामी सबै आफ्नो जीवन मा देखेको कति आफ्नो protagonist छ अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ। के तपाईं खण्डमा को पाठ्यक्रम गर्नेछ? पहिलो सबै को यो खेल को मुख्य विषय केवल "इनाम शिकार", अर्थात् Greaves उहाँले जफत वा एक वा अर्को व्यक्ति को समाप्त गर्न निर्णय कसरी कुरा हुनेछ, थियो उसलाई पछि, राम्रो, यो धेरै व्यक्तिको रूपमा प्रकट हुनेछ हो भन्नुभयो गर्नुपर्छ अन्तिम मालिक स्तर। र पराजित यो पाठ्यक्रम आवश्यक हुनेछ, एक चरवाहे Duel। खेल सबैभन्दा उल्लेखनीय क्षण को एक नाम को सबै भन्दा तपाईं संग परिचित, तपाईं ती पटक को इतिहास को रुचाउनु हो भने, खेल पुस्तकहरु र चलचित्र यी व्यक्तिहरूलाई, साथै काल्पनिक वर्ण बताइरहेका को बस भरिएको छ किनभने हुनेछ भन्ने तथ्यलाई छ। Gunslinger खण्डमा: यो पालो एकदम Juarez को खेल कल adorns किनभने यो तर, आनन्दित गर्न सक्नुहुन्छ।
निस्सन्देह, Juarez को कल लागि: Gunslinger कोड अवस्थित, र तपाईं तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर हामी खेल जटिल छ भनेर भन्न सकिँदैन, त्यसैले तपाईं आफ्नै प्रक्रिया सामना संभावना छ। तपाईं प्लट यस्तो विकास तपाईं सम्झना गर्नेछ लाग्छ भने, त्यसपछि तिमी गलत हो। निस्सन्देह, असम्बन्धित स्तर को एक सेट छैन षड्यन्त्र मडारिनुहोस् को प्रशंसक लागि एक आकर्षक र मोहक प्रत्याशा छ, तर यहाँ तपाईं निश्चित ध्यान गर्नुपर्छ जो एक हाइलाइट छ। यो सुविधा - मुख्य पात्र आफैले कथा को वर्णनकर्ता छ जो। उहाँले sarcastically निरन्तर jokes, र jokes वस्तुहरु सबै छन् - र स्वयम्ले साहसिक समयमा, र यसको वर्तमान विद्यार्थी र खेल को अन्य भागहरु, र थप। तर बित्तिकै तपाईं मजाक चिन्ता गर्न सुरु महसुस रूप मा, narrative टोन परिवर्तन हुनेछ र तपाईं पत्ता लगाउन Greaves पछि निहित के सुरु हुनेछ, र यो धेरै शहर Juarez, को श्रृंखला को सबै अघिल्लो एपिसोड एकताबद्ध जो संग जोडिएको कसरी छ। किनभने यसको लागि समय उड, Gunslinger कोड: तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ Juarez को खेल कल मा आवश्यक छैन।
बिट embellished इतिहास
एकल-खेलाडी खेल अनुमति दिन्छ विकासकर्ताहरूले भइरहेको छ के को रूपरेखा संग खेल्दै निकै चासो हो। सबैलाई Bastion भनिन्छ अद्भुत खेल सम्झना - त्यहाँ protagonist उत्पादन सबै कार्यहरू सँगसँगै एक वर्णनकर्ता छ। यो एक अविश्वसनीय वातावरण सिर्जना गरियो। यो खेल मा, विकासकर्ताहरूले अन्य तरिका वरिपरि सानो बिट गर्न निर्णय र तपाईं सबै कि napletet वर्णनकर्ता सामना गर्न छ। उहाँले अझै पनि झूटो थियो - तर यहाँ रोडा पुरानो Greaves छ। हरेक कथामा, कि छ, तपाईं पारित हुनेछ कि हरेक मिशन मा, त्यहाँ कम्तिमा एक सानो झूट, priviraniya र embellishments छ। र यो केवल केही मिशन हो - प्रायजसो, त्यहाँ सत्य भन्दा बढी निहित। कहिलेकाहीं यो absurdity को बिन्दु गर्न आउछ, र वर्णनकर्ता रूपमा लामो तपाईं बीस Apaches चारै ओर छैन रूपमा झूठ गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसपछि दर्शक को एक कहानी cowboys थियो रूपमा, उहाँलाई सही - र भारतीयहरुलाई तुरुन्तै हावामा भंग, र आफ्नो ठाउँमा cowboys हुनेछ। सामान्य मा, यो एकदम असामान्य र रोचक कदम हो, तर यो त्यहाँ vagueness एक भावना हो खेल मा अझै पनि छ, भइरहेको छ के एक निश्चित अधिशेष वर्णनकर्ता प्रभाव। तथापि, यो स्तर को एक सेट संग एक-खेलाडी खेल हो भनेर बुझे गर्नुपर्छ, असम्बन्धित कथा - विकासकर्ताहरूले स्वागत जो तिनीहरूले खेल चरणको कैद गर्न सक्षम हुनेछ, आवश्यक थियो, र तिनीहरू यहाँ यो दृष्टिकोण आविष्कार।
Gunslinger: उल्लिखित रूपमा, यो दृष्टिकोण एक दृश्य Juarez केही अतिरिक्त अंक खेल कल थपिएको छ। मुख्य पात्र र अन्य सबै वर्ण को रूसी आवाज तपाईं संस्करण कुनै पनि प्ले आनन्द उठाउन सक्छौं भनेर एकदम राम्रो छ। तर एकै समयमा तपाईं विकासकर्ताहरूले आफूलाई आफ्नो आविष्कार SPOILED थियो भन्ने तथ्यलाई ध्यान गर्नुपर्छ। माथि एक निश्चित समय - पहिलो नजर मा यो षड्यन्त्र विकास एक अविश्वसनीय रोमाञ्चक तरिका हो, र जस्तै यो साँच्चै हो कि जस्तो लाग्न सक्छ। त्यसपछि अप्रिय क्षणहरू पनि वर्णनकर्ता तपाईं एक कठोर रूपरेखा मा एक व्यापक गेमप्लेको र ड्राइभिङ रमाइलो गर्न अनुमति छैन जो थाल्छन्। तपाईं भारतीय लड्न गर्न चाहनुहुन्छ? एक वर्णनकर्ता तपाईं बारूद सकिएको छ भने छ, र तपाईं उम्कन गर्न आवश्यक छ। तपाईं एक स्थान छोड्न चाहनुहुन्छ? तपाईं पहिलो अर्डर यात्रा जारी राख्न एक व्यक्ति मार्न आवश्यक छ। सामान्य मा, स्थान स्मार्ट कदम अर्को "गलियारे" सिर्जना गर्न प्रयोग गरिएको थियो रूपमा, एक बिट unnerving छ - र यो एकदम लाज छ। तर, सिद्धान्त मा, Juarez को खेल कल बिगार्छ छैन: Gunslinger - रूसी आवाज कहिलेकाहीं सम्झौता पूरा गर्न खोज्छ, तर प्रायजसो यो उचाईमा छ।
Juarez को परियोजना कल: विगतका एपिसोड देखि Gunslinger खेल मेकानिक्स लगभग कुनै - अब तपाईं जो, तर, अब पम्प्ड गर्न सकिन्छ एकल वर्ण, लागि विशेष खेलिरहेका छन्। ओह, यो श्रृंखला पायो र अघि पहिलो व्यक्ति Shooters मा फैशन भूमिका-प्लेइङ तत्व। निस्सन्देह, Bioshock वा Borderlands को रूपमा कुनै यस्तो शक्ति छ - जंगली पश्चिम अझै पनि levitation, telekinesis र Pyromania लागि कुनै ठाउँ छ - तर अझै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो चरित्र थप अत्यधिक विशेष। कौशल तीन रूख विभाजित छन् - पहिलो तपाईं सीधा युद्धमा छिटो र सही शूटिंग revolvers हो जो सेनानी बनाउन अनुमति दिन्छ, र दोस्रो यो shotguns, Melee हतियार र Melee लडाई को सम्पत्तिको सिक्न सम्भव बनाउँछ, राम्रो, र तेस्रो प्राय छैन भन्दा हुनेछ कि Duel लागि जिम्मेवार छ । अनुभव अंक तपाईं हत्या शत्रुहरू लागि प्राप्त र थप प्रभावकारी तपाईं आफ्नो शत्रु हो गोली, तपाईं प्राप्त अधिक अंक। Juarez को खेल कल: Gunslinger तपाईं विकासको लागि अवसर धेरै दिन्छ, तर हामी तिनीहरूले धेरै विविध छन् भनेर भन्न सक्दैन।
Juarez को खेल कल: Gunslinger तपाईं आफ्नो खण्डमा सुविधा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ Cheats, तर यो आफ्नो चरित्र पहिले नै cheater एक बिट छ भनी उहाँ सम्झनुहुन्छ लायक छ - यसको विशेष क्षमता धन्यवाद। तपाईं श्रृंखला को दोश्रो भाग मा प्ले छ भने, यो त्यहाँ दुई वर्ण थिए सम्झना गर्नुपर्छ - ती एक मा, कठिन सरल, नजिक लडाई मा राम्रो, तर खराब गुप्ति थियो। दुई वर्ण प्रत्येक आफ्नै विशेष सुविधाहरू छन्, र तपाईं जोडी बाहिर अधिकतम squeeze तिनीहरूलाई बीच स्विच गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईं एक नायक छ, तर त्यो दुई अघिल्लो को एक मिश्रण छैन - बरु, यो धेरै पहिले क्रूर शक्ति लिए जो एक अक्षर उल्लेख कि रे, थप पनि त्यस्तै हो। यस श्रृंखला को ट्रेडमार्क - यो तपाईंले एकाग्रता गर्ने क्षमता छ। तपाईं छोटकरीमा समय सुस्त गर्न सक्नुहुन्छ, र यो अवधि थप ठीक शत्रुहरू गोली मार गर्न सक्छन् समयमा - यदि तपाईं शत्रुहरू को एक ठूलो संख्या द्वारा आक्रमण अत्यन्तै प्रभावकारी हुन्छ। तर सबै होइन - हामी Greaves र आफ्नै क्षमता, मृत्युको भबिष्यको आभास भनिन्छ जो छ। तपाईंले पहिले नै धेरै पटक आउँदा र अर्को शट समय फेरि तल slows रूपमा, घातक हुनेछ, र तपाईं डज गर्न गाडे छ भनेर गोली प्राप्त। यो कौशल पनि गाह्रो परिस्थितिमा अत्यन्तै उपयोगी छ, र यो समय र फेरि सुरक्षित हुनेछ। Juarez को कल मा: Gunslinger दरार फरक हुन सक्छ, र यो कौशल फरक नाम प्राप्त हुन सक्छ, तर तपाईंले कार्य मा हेर्न जब, यो पहिले नै यो भ्रममा गर्छ के छैन छ।
तपाईं श्रृंखला को तेस्रो भाग मा प्ले गर्ने दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति हुन् भने तपाईं त्यहाँ हतियार सानो ध्यान संग सम्भवत सूचना हुनेछ - विकासकर्ताहरूले निर्णय गरेका छौं हतियार एक विशाल राशि, सबैभन्दा मानक Shooters जस्तै, तिनीहरूलाई कुनै पनि गुणस्तर दिने छैन बनाउन वा मतभेद। परिणाम धेरै आवेकहिन थियो। तर Juarez को कल मा चड्डी: Gunslinger - डली। सारा खेल तपाईं ठ्याक्कै तपाईं सशस्त्र छन् के संग पराउँछु हुनेछ भनेर, र यो तपाईं साँचो खुशी ल्याउनेछ प्रत्येक एक, अद्वितीय छ र यसको आफ्नै विशेषताहरु र उल्लेखनीय उपस्थिति छ।
अभियान को brevity
यो protagonist, बस असंख्य बताएको छ कि इतिहास, जस्तो थियो। तर छोटो तिनीहरूले सकिन्छ। तर, परिणाम छैन खेल प्ले बढी भन्दा दस घण्टा छ। यो समस्या हुने थिएन खेल अरू केही थियो भने, तर यो अब खेलाडीहरूलाई बिल्कुल केहि प्रदान गर्दछ। कुनै बहु मोड, rumored थियो, कुनै खुला संसारमा, कुनै बोनस वर्ण वा हतियार। यो, को पाठ्यक्रम, निराशाजनक, विशेष गरी निष्ठा र अभियान द्वारा उत्पादित प्रभाव, छैन परियोजना को बल हो भन्ने तथ्यलाई दिइएको।
स्तर र मालिकहरुलाई
तिनीहरूले साँच्चै सुन्दर र रोचक, तर कतै बीचमा अप छन् भन्ने तथ्यलाई - खेल मा निर्माण गरिएको छ कसरी स्तर बारे पनि उल्लेख छैन। बस फरक कथाहरू भाग रूपमा, एउटै को पुनरावृत्ति - र त्यसपछि saddest कुरा सुरु हुन्छ। तपाईं वातावरण को पट्टाइ लाग्ला हुनेछ, एउटै अवस्थामा आफूलाई पाउनुहुनेछ, र यो सबै मात्र खराब आवाज-माथि वर्णनकर्ता पतला गरिनेछ। तर तपाईं मालिक पुग्दा, एक चमत्कार जस्तो गर्छन्। छैन पहिलो सम्म - पहिलो तपाईं अझै पनि प्रेरित र दोस्रो वा तेस्रो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि उनीहरूले सबै एउटै हुन् भनेर महसुस। प्रत्येक स्तर मा हाकिम को खण्ड को प्रक्रिया लगभग प्रतिष्ठित कहिल्यै: पहिलो, तपाईंले आफ्नो शट (एक मिसिन बन्दूक देखि ज्यादातर गरे) बाट लुकाउने, कभर लागि चलाउन र यसलाई भारी आगो चलाउनु, तर आफ्नो स्वास्थ्य द्वंद्वयुद्ध सुरु गर्न चाहेको बिन्दु ल्याउन जब। त्यो तपाईं यस परियोजना मा मालिकहरुलाई को 90 प्रतिशत गुजर नुस्खा भयो सबै छ।
यो खेल को लाभ गर्न श्रेय गर्न सकिन्छ? किन यो राम्रो हो? पहिले, यो जंगली पश्चिम र श्रृंखला को दोश्रो भाग को कृति को परम्परा गर्न फिर्ती टिप्पण लायक छ। यो हामी खेलाडीहरूलाई चाहन्थे के, र विकासकर्ताहरूले यसलाई तिनीहरूलाई मात्र तेस्रो प्रसङ्ग पूरा विफलता पछि दिन फैसला गरेको छ कि धेरै दु: खी ठीक छ। वास्तविक वर्ण, किताबको वर्ण र विश्व-प्रसिद्ध वेस्टर्न्स - दोश्रो, खेल मा तपाईं समय सम्बन्धी एक विशाल सांस्कृतिक stratum पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईं कला र युग को एक प्रेमी हो भने यो सबै, तपाईं आनन्दित हुनुपर्छ। तपाईं पनि वर्णनकर्ता को भूमिका खेल्छ जो, र यो एक धेरै रोचक तरिका बनाउँछ मुख्य पात्र बारेमा भूल सक्दैन - एक पनि यो विधि अद्वितीय छ भनेर भन्न सक्छ।
तर, तपाईंलाई थाहा, यो छैन कमजोरीको बिना थियो। पहिलो र तिनीहरूलाई को सबै भन्दा ठूलो - यो एक विमान हो। स्तर नै मालिकहरुलाई, स्थानहरू वस्तुतः अपरिवर्तित रहिरहे बारम्बार छन्, र यो सबै दमन गर्न, वर्णनकर्ता देखि पनि मेहनती अल्सर सुरु हुन्छ। साथै, वर्णनकर्ता आफूलाई सट्टा विचार को भारी संभावित प्रयोग, उहाँले विपरीत मा, खेलाडी गरेको बक्स, पर्याप्त गेमप्लेको आनन्द उसलाई दिने छैन ड्राइव भन्ने तथ्यलाई द्वारा saddened।
2013, कि पहिले नै अपेक्षाकृत लामो समय हो - Gunslinger: तपाईं Juarez को रिलिज मिति कल भन्ने तथ्यलाई सुरु गर्नुपर्छ। स्वाभाविक, हामी पहिले एक दशक को कम्प्युटर मा जानेछ आशा गर्नु हुँदैन, तर विशेष गरी माग धेरै छैन स्पष्ट छ। हामी युरोप, अमेरिका, जापान IE र यति मा केन्द्रिय बजार मा सबै मञ्चहरूमा, मा, जारी मिति बारे विशेष कुरा त, त्यो 22 मई देखा, तर रूस पहुँच ढिलाइ भएको थियो, र रूसी खेलाडीहरूलाई मात्र 14 परियोजना परीक्षण गर्न जुन सक्षम छन् लगभग एक महिना पछि, कि छ। Gunslinger आवश्यकताहरु: तर यो Juarez को कल मा विशेष के हेर्न समय छ। खुसीको धेरै खेलाडीहरूलाई, परियोजना सञ्चालन प्रणाली मा एक सार्वभौमिक मुद्दा हुन बाहिर गरिएका - यो पनि Windows XP मा चल्छ। तर, यो अझै पनि सातौं संस्करण सुरु र माथि गर्न यसलाई प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ। प्रोसेसर, तपाईं एक दोहरी-कोर, कम्तिमा2GHz संग राम्रो यद्यपि, दुई केन्द्रक को आवृत्ति3भन्दा बढी GHz हुनेछ भने आवश्यक हुनेछ, वा। राम दुई गिगाबाइट न्यूनतम कन्फिगरेसन लागि पर्याप्त छ, तर यो एक सहज खेलको लागि कम्तिमा दुई पटक वृद्धि गर्न सिफारिस गरिएको छ। तर एक उन्नत ग्राफिक्स कार्ड विशेष आवश्यकता छैन - तपाईं अन्य अवस्थामा, तपाईँ कम्तिमा एक गिगाबाइट राम्रो अलि बढी ग्राफिक्स स्मृति प्रदान चाहन्छु, भिडियो स्मृति 512 एमबी संग पहिले नै खेल्न सक्छन्, तर।
सुरु कसरी, प्रणाली आवश्यकताहरू: चिहानमा RAIDER को वृद्धि
संशोधन Pixelmon: जीवाश्मों। जहाँ फेला पार्न?
मा Warglaive Azzinoth वाह
को "Sampo" मा विदेशी कार के हो
माछा veiltail: वर्णन, विशेषताहरु र हेरविचार सामग्री
को कालुगा मा रेडियोलजी संस्थान: ठेगाना, फोटो र समीक्षा
"कैट्यो" नयाँ पीढीको चलन छ
अन्ना Zholobova - जो anorexia को मृत्यु केटी
Windows7को लागि सबै भन्दा राम्रो defragmenter
एक बहु खेल के हो?
"शुभ रानी" Elizaveta Petrovna